पहिरो गएको दुई दिनपछि पुग्यो प्रहरी, एकको शव निकालियो – Sandesh Munch
July 13, 2020 124
विराटनगर : मोरङको केराबारी गाउँपालिका-२ सिंहदेवीको खानी गाउँमा पहिरोमा परेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएकी ५९ वर्षीया धनकुमारी आङ्वो लिम्बूको शव घटना भएको दुई दिनपछि सोमबार दिउँसो भेटियो। शनिबारराति १० बजे घर माथिबाट झरेको पहिरोमा परेर उनी बेपत्ता भएकी थिइन्। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार घरमाथिबाट पहिरो झरेको थाहा पाएर उनी भाग्न खोजेको पाइएको छ।
भाग्ने क्रममा पहिरोले श्रीमानसँगै घरमा बसेकी उनलाई पुरेको थियो। श्रीमान भने भागेर बाँच्न सफल भएको एसपी खड्काले बताए। पहिरोले लिम्बूको एउटा घर र दुई वटा गोठ पनि बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङको सबै भन्दा दुर्गम मानिने सिंहदेवीमा घटना भएको दुई दिनपछि सोमबार दिउँसो २ बजे मात्रै प्रहरी पुग्न सकेको थियो। सञ्चार सम्पर्कविहीन रहेको घटनास्थलमा निक्कै कष्टपूर्ण यात्रा गरेर प्रहरी पुग्न सकेको एसपी खड्काको भनाइ छ। घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले दुःखका साथ महिलाको शव पहिरोबाट बाहिर निकाल्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्‍यो।
वडाध्यक्ष प्रेम लिम्बूले वर्षासँगै ठाउँठाउँमा गएको पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा घटनास्थलमा पुग्न निक्कै कठिन परेको बताए। खोर्साने, केराबारी, चुलाचुली हुँदै सिंहदेवीसम्म पुग्ने पहाडी सडकको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरेर समस्या भएकाले घटनास्थलमा पुग्न समय लागेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच मोरङको रंगेलीमा खोलाले बगाएर ल्याएको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। रंगेली नगरपालिका-८ मा चिसाङ खोलाले बगाएर ल्याएको अवस्थामा अन्दाजी ४०/४५ वर्षीय पुरुषको शव भेटिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका प्रहरी निरीक्षक लेखनाथ दाहालले खोला किनारमा आइतबारराति भेटिएको शवको पहिचान हुन नसकिरहेको जानकारी दिए। अहिलेसम्म चिनजानका कोही पनि सम्पर्कमा नआएको र शवलाई रंगेली अस्पतालमा राखेर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको दाहालको भनाइ छ।
Prevसुनसरीका १०२ जना संक्रमितमध्ये ८८ जना निको भए
Nextखोटाङका चार युवाले शुरु गरे सामूहिकरूपमा ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती
बुढीगंगा नदीमा डुबेर बेपत्ता किशोरको खोजी जारी
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27390)